ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ရှင်သန်(ဖြစ်တည်)ခြင်းအနုပညာ ( ၈) ချက်
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော သက်ရှိသတ္တဝါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက လူအများစုကလည်း သူတို့ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အလှ၊ ကျက်သေရှိစွာ တင့်တယ်သောအလှ၊ ခေတ်အလိုက်စတိုင်လ်မိခြင်းနှင့် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသမီးတွေအဖြစ် ယုံယုံကြည်ကြည်လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေမှာ တစ်ခြား ဘာတွေများချီးကျူးလေးစားဖွယ်ရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးသလဲ? သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖြစ်တည်မှုအခြေအနေတွေအပြင် ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ၊ တန်ဖိုးထားမှုတွေကြောင့်လား? အိုကေ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘယ်လိုအနုပညာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်?
၁။ ခေတ္တခဏဆိုတဲ့ အချိန်ကာလလေးတွေမှာ ဖြစ်တည်ခြင်း (Being in the moment)
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘဝရဲ့ အသေးအဖွဲအရာလေးတွေမှာ ပျော်မွေ့ရှင်သန်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ဖို့အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာအဖြစ် ခံယူထားကြပါတယ်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို အရသာခံပြီး ကောင်းကောင်းသောက်မယ် ဒါမှမဟုတ် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီလေးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်လှပစွာ လိမ်းခြယ်မယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဝိုင်လေးတစ်ခွက်နဲ့ ညနေခင်းတွေမှာ အေးချမ်းစွာအပန်းဖြေမယ်။ ပြီးတော့ အဲ့လိုအချိန်တွေကိုလည်း တန်ဖိုးထားပြီး ပျော်ရွှင်စွာရှင်သန်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘယ်တော့မှ ကမန်းကတန်းအပြေးအလွှားဖြစ်မနေကြဘူး။ သင့်ဘဝရဲ့ မိနစ်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်ဖို့နှင့် ၎င်းကို အပြည့်အဝရှင်သန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အများစုဟာ ဒီအရာတွေကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲ သဘောထားတတ်ကြပြီး ၎င်းကို ပျော်ရွှင်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိသလို အလုပ်တွေကိုလည်း တစ်ချိန်လုံးလုပ်နေရမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကျွန်မတို့တွေထက် ပိုပြီး ကောင်းကောင်းသိထားကြပါတယ်။ ဘဝရဲ့ ခတ္တခဏဆိုတဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ ပျော်မွေ့ပါ။
၂။ Sensuality ဟာ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်တယ်
ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်လုပ်သမျှအရာအားလုံးက သင်ပျော်ရွှင်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီအချက်ကို အလေးအနက်ထားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံးပိုးထည်ဝတ်စုံတွေနှင့် အလှဆုံးအတွင်းခံတွေကို ဝတ်ဆင်ထားမှ ခေတ်မှီတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း လှပတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်တွေဟာ သူတို့ကို စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီအချက်ကပဲ သူတို့ရဲ့ intimate life ကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သက်ရောက်မှုတွေများစွာရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘယ်လောက်တောင် passionate ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်ကြားဖူးကောင်းကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာ ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တယ် (Self-Confidence is Sexy)
သင့်အနေနဲ့ ‘ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုတာ ဘယ်လိုမိန်းကလေးပါလိမ့်’လို့ အတွေးထဲကို ချက်ချင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်တောင် ရှက်ကြောက်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလို့ လုံးဝမတွေးမိမှာ သေချာပါတယ်။ သူမဟာ အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိနေပြီး သူမလိုချင်တဲ့အရာကို အတိအကျသိနေသူပါ။ ယုံကြည်မှုဆိုတာက အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ copy ဖြစ်ရတာထက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ unapologetically ဖြစ်ဖို့ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။
၄။ သင့်ရဲ့ အစားအသောက်တွေကို နှစ်ခြိုက်ပါ
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အစားအသောက်တွေကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူငယ်ချင်းတွေ ၊မိသားစုတွေနဲ့ လူမှုရေးအခြေအနေတွေမှာ အမှန်တကယ်အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ နှင့် ပျော်မွေ့ဖို့ တစ်နေ့သုံးကြိမ်အစားအသောက်အတူတူစားကြပါတယ်။ သင်စားတဲ့အစားအသောက်တွေကနေ သာယာကျေနပ်မှုတွေကို ရရှိနိုင်ပြီး လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုလည်း ပြေလည်စေနိုင်တာကြောင့် အစားအသောက်တွေကို အကောင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ပေါင်းသင်းပါ။
၅။ အသက်အရွယ်ဆိုတာ နံပါတ်တစ်ခုမျှသာ
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ကြီးခြင်း၊ ငယ်ခြင်းကို ဂရုမစိုက်ကြသူတွေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက တစ်ခြားအမျိုးသမီးတွေလို အိုမင်းရင့်ရော်မှာကို တွေးကြောက်နေသူတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အသက် (၃၀)(သို့) (၄၀) အရွယ်မှာလည်း စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်လာကြသူတွေမို့ပါ။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ အသက်(၂၀) ကျော်လာရင် အိုမင်းခြင်းတွေ စတင်လာပြီလို့ ထင်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲ့ဒီ့အရွယ်မှာ စတင်ပြီး ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာတယ်၊ ကျက်သရေရှိလာတယ်ဆိုတာကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ အသက်အရွယ်တွေဟာ တစ်ချိန်လုံးကြည့်ကောင်းနေကြပါတယ်။
၆။ အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေး/အရည်အချင်းက ပိုသာလွန်တယ်
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေးဂရုစိုက်ကြသူတွေပါ။ သူတို့ဘဝရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရတာကို နှစ်ခြိုက်သူတွေပါ။ သူတို့ရဲ့ မိတ်ကပ်၊ ရေမွှေးစတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကနေ သူတို့ဝတ်ဆင်တဲ့ အဝတ်အစားတွေအထိ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အရာတွေကို ခံစားချင်ကြသူတွေပါ။ ဒါ့အပြင် ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကိုလည်း တော်တော်လေးသဘောကျတတ်ကြပါသေးတယ်။
၇။ In Love With Love
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထဲထဲဝင်ဝင်ခံစားတတ်ကြပြီး လက်ထပ်ခြင်းမှာတော့ လက်တွေ့ကျမှုနှင့် ရေရှည်ဆက်နွယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ ပိုမိုဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့ခံစားချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာလည်း သူတို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ မခံစားရဘဲ ချန်ရစ်ထားခဲ့ပြီး နောက်တစ်ယောက်ကို ပြောင်းချစ်တတ်ကြပါတယ်။
၈။ Style ဆိုတာ အမြဲတမ်းကိုယ်ပိုင်ကိစ္စ/ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ် (Style is always Personal)
ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက် အမှီလိုက်နိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်ညီမယ့်အရာတွေကို ရှာဖွေပြီး လှပသောခံစားမှုလေးတွေကို ခံစားတတ်သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ တစ်ခြားလူတွေနဲ့ တူအောင် ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားကြပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားလေ့မရှိဘဲ ၎င်းတိုကို ထူးခြားအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြသူတွေပါ။ သူတို့ဟာ အလွန်အကျွံပြင်ဆင်တာမျိုး လုပ်လေ့မရှိတာကြောင့်လည်း အချိန်တိုင်းလိုလို သက်တောင့်သက်သာအခြေအနေလေးတွေနဲ့ ရှင်သန်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။